Qariiradda (MAP) federaalka qabyaaladeysan ee SOOMAALIYA oo lasoo saaray (Arag yaabkan).!! - Caasimada Online
Home Warar Qariiradda (MAP) federaalka qabyaaladeysan ee SOOMAALIYA oo lasoo saaray (Arag yaabkan).!!
Qariiradda (MAP) federaalka qabyaaladeysan ee SOOMAALIYA oo lasoo saaray (Arag yaabkan).!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Soomaaliya oo ku socota Nidaamka Federaalka oo aan caddeyn qaabka loo raacayo ayaa waxaa dhowaam daraasad lagu sameeyay sida federaaleynta Soomaaliya u socoto, iyadoo xaruna Cilmi baarista ee Chatam House magaalada London ay soo saartay daraasad ku saabsan xaaladda federaalka Soomaaliya.
Daraasadda oo uu qoray Jason Mosley oo Afrika u qaabilsan xarunta ayaa rajo xumo badan ka muujiyay sida uu ku socdo nidaamka federaalka beeleysan ee Soomaalida, laakiin waxaan halkan idinku soo gudbineynaa khariidada Federaalka Soomaaliya oo muuqaalkeedii ugu horeeyay noqday sida soo socda: